Maaskarada ragga - Dharka ragga ee qaabka leh | Ragga Stylish
Waxaan la kulannaa xaalad degdeg ah oo caafimaad waxaanan kugula talineynaa in waji-furka loo isticmaalo tallaabo amni oo laga ilaaliyo fayraska loo yaqaan 'covid-19 virus'. Sababtaas awgeed waa inaan isticmaalno maaskarada si loo daboolo afka iyo sanka iyo in la yareeyo faafitaanka cudurrada.
Noocyo badan oo ka mid ah nashqadeeyayaasha dharka iyo agabka naqshadeeyayaasha ayaa doorbiday inay gaaraan isla ujeeddadaas, Naqshadeynta afka oo leh naqshado xarrago leh adigoon ilaawin fikradda ilaalinta iyo raaxada.
Waxaa jira waji qarsoodi ah oo suuqa yaal, waxaan ka leenahay kuwa la tuuri karo, kuwa dib loo isticmaali karo iyadoo la sameeyo dhaqmo badan. Kuwa dib loo isticmaali karo waxaa ka go'an in lagu soo saaro qalab tayo sare leh, gaar ahaan inay noqon karaan kuwo neefsada oo aad u adkeysi badan.
Ha iloobin inay dhammaantood isku dayaan inay gaaraan himilo isku mid ah, oo ay yeeshaan Caqabada ugu fiican ee leh dharka antibacterial-ka iyo hubinta ilaalinta, sida lagu xukumo sharciyada iyo xeerarka khuseeya.
1 Maaskaro isboorti
1.1 Maaskarada ceeriin
1.2 Maaskarado sumadaysan
2 Maaskarada dharka
2.1 Wajiyadaha 226ERS
3 Maxaa lagu xisaabtamayaa markaad iibsaneyso maaskaro?
Maaskarada ciyaaraha iyagu waa kuwa iibinta ugu badan leh, la qabsiga weyn awgood, qaabkood ama jilicsanaantooda jilicsan taas oo ka dhigaysa mid fudud oo raaxo leh in la xidho iyo, dabcan, neefsasho.
Maaskarada noocan ah Waxay leeyihiin shaandho leh saameyn bakteeriyada. Waxaa loogu talagalay iyada oo ujeedadu tahay bixinta ugu fiican. Waxay ku habboon yihiin dadka waaweyn oo si khaldan loo qaabeeyey. Waa la dhaqi karaa ilaa 20 jeer, halabuurkiisuna waa cudbi iyo caag. Gudaha sidoo kale waa 100% cudbi dabiici ah waxaana lagu daaweeyaa AEGIS antimicrobial.
Adidas waxay ku sharraxeysaa naqshadeeda runtiina waa inay cajiib yihiin. Waxay yihiin kuwo jilicsan oo aad u neefsan kara, waxay ku hagaajineysaa naqshad weyn qaabka wajiga, iyadoo si sax ah u dabooleysa dhinacyadeeda. Waa la dhaqi karaa loona isticmaali karaa maalin kasta.
Reebok sidoo kale waxay raacdaa isla fikradda naqshadeynta. Labada magac waxay soo saaraan maaskaradooda iyagoo leh 93% polyester dib loo rogay iyo 7% elastane waana in la ogaadaa in sida dhammaantood aan loogu tixgelin adeegsiga caafimaadka, laakiin waxay ka caawinayaan ka hortagga gudbinta dhibcaha neefta.
Decathlon sidoo kale wuxuu sameeyaa saxiixiisa oo leh maaskaro isboorti oo xajin kale leh. Waxay bixisaa heer neefsasho heer sare ah waxaana loo soo saaray dadka waaweyn iyo carruurta ka weyn 10 sano.
Waa waji qarsoodi in bixiyaan badbaadin iyo iska caabin, ku habboon isticmaalka maalinlaha ah iyo isboortiga oo leh hawo hawo habboon. Waxay leeyihiin nidaam isku dhejin ka duwan kan soo jireenka ah, maaddaama ay ka kooban tahay laba xarig oo cinjirka ah oo lagu dhejin doono madaxa gadaashiisa iyo dhegaha korkiisa, oo aan u dhexayn doonin. Waa la dhaqi karaa waxayna hayaan ilaa ku dhowaad 70 saxanka biyaha lagu dhaqo. Lakabkeeda sare wuxuu ka sameysan yahay polyester microfiber tatefan-biyaha celiya oo celiya dareerayaasha.
Maaskaradaas waxaa loo soo saaray inay sharad ku galaan naqshad gaar ah oo ka farxisa oo ilaalisa. Waxaa lagu sameeyaa seddex lakab oo difaac ah, oo leh dhar biyaha celiya oo dib u celiya dareerayaasha isla markaana ka kooban 80% polyester iyo 20% elastane.
Waa dukaamada internetka. Waxay ku siinayaan naqshadahooda ugu fiican si aad ugu labisto xarrago. Dhammaantood waxay wax ku ool u yihiin miirashada bakteeriyada, waxay si ammaan ah ula jaanqaadaan qaabka wejiga waana la dhaqi karaa. Buff wuxuu doortay maaskaro leh naqshad iyo halabuur ka duwan, wuxuu ka kooban yahay miirayaal leh 98% waxtarka bakteeriyada iyo qayb firfircoon: titanium dioxide iyo chloride lacag ah si loo ilaaliyo gudaha dharka maaskaro.
Maxaa lagu xisaabtamayaa markaad iibsaneyso maaskaro?
Waa in la ogaadaa in noocan ah maaskarada fayodhowrka loo naqshadeeyay inay kaabayaan habkaaga labbiska oo aysan ahayn maaskaro nadaafadeed ama qalliin caadi ah. Waxaa loo abuuray inay yihiin dhammaystiridda tallaabooyinka fogeynta jirka iyo nadaafadda.
Taasi waa sababta qaar badan oo iyaga ka mid ahi ula yimaadaan calaamadeynta taas la kulmo qeexitaannada mas'uuliyadda caafimaadka, maxaa yeelay qaar badan baa iska amaahiya si ay u gutaan.
Maaskarada dharka oo dhami ma wada laha tayada sifeynta, waa mid ku habboon in soo saarkeeda gudahood ay ugu yaraan leedahay 3 lakab oo qalab kala duwan ah. Marada afka u dhaw ayaa la doorbidaa inay noqdaan cudbi, maadaama ay sifiican u xajineyso dhamaan walxaha iyo dhibcaha candhuufta.
Dharka kore waa in laga sameeyaa polypropylene maadaama ay ugu egtahay tan loo isticmaalo waji-furka qalliinka. Intaa waxaa dheer, maaddadani waxay ka dhigeysaa biyo celin wanaagsan.
Haddii ay dhacdo in dib loo isticmaali karo, Waa inaad sheegtaa tirada maydhashada iyo heerkulka si loo ogaado inta ay ku dhici karto, maaddaama in badan oo ka mid ahi ay waayaan qayb ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban yihiin ama cimri dhererkooda haddii isticmaalkoodu ka bato. Ku habboon ayaa ah in iyaga la dhaqo maalin kasta ka dib isticmaalka iyo heerkulka 60 °.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Maaskarada ragga